နှစ်တွေကြာသွားလည်း ယုတ်လျော့သွားခြင်းမရှိတဲ့ CL နဲ့ Park Bom တို့ကြားက ချစ်ခြင်းတရား
Queen CL ကတော့ YG Entertainment ကနေ ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ခု 2021 ခုနှစ်မှာဆို နှစ်စကနေစပြီး ခုချိန်ထိ သီချင်းတွေ ဆက်တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဒီလဆို ပထမဆုံး full length album “Alpha” ကိုပါ ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ထို album ဟာ audio version ဘဲ ထွက်ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ CL ဟာ ထို သီချင်းတွေကို Music video အနေနဲ့လည်း ရိုက်ထားပြီး တခုပြီး တခု ချပြဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ပုံပါဘဲ။ album ထဲက “Tieacherry” သီချင်း music video ဟာ October 20 ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
October 23 ရက်နေ့မှာတော့ ထို MV နဲ့ ပက်သက်ပြီး Park Bom က CL ကို စာပို့ခဲ့တဲ့ screenshot လေးကို CL ဟာ Instagram My day မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ Caption ကတော့ “Our Bom Unnie” ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ Contact name ကိုလည်း “Bom unnie” ဆိုပြီး မှတ်ထားတာပါ။ screenshot ထဲက အကြောင်းအရာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Bom: “Charein ရေ … နင်က အရမ်းလန်းလွန်းလို့ ငါဘာစကားမှတောင် မဆိုနိုင်ဖူး… နင့်ရဲ့ interview က ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. ပြီးတော့ stage ကလည်း အရမ်းမိုက်တယ်ဟာ… တကယ်ပြောတာပါ… ငါ နင့်ရဲ့ fan ဖြစ်လာပြီ👍🏻😍”…. “Promotion ​တွေကလည်း ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေနေတာဘဲ”… “သီချင်းက တကယ်နားထောင်ကောင်းတယ်”… “အားတင်းထား !!”
CL: “Unnie, ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်” “အမကို အရမ်းလွမ်းနေတာ” “ကြိုးစားထား… hwaiting.”
ဒီညီအမနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားက သံယောဇဉ်ကတော့ မျက်ရည်လည်စရာပါဘဲနော် ပရိသတ်ကြီးရေ။ CL ဟာ YG ကို လှည့်မကြည့်တော့ပေမဲ့ 2NE1 ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ သံယောဇဉ် မပြတ်ရှာပါဖူး။ ခုတစ်ခေါက် သူ့ solo album မှာလည်း 2NE1 အဖွဲ့နဲ့ပက်သက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ “Let It” ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပတ် MV ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next သူငယ်ချင်းတွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုံးရှုံးလာရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောခဲ့သူ Jin »
Previous « ရိုက်ကူးရေးလောကထဲက ဖိနှိပ်မှုတွေအကြောင်း ပေါ်တင်ထုတ်ဖော်ပြောပြလာတဲ့ Tao